Tsy Eken’ny Fikambanan’ny Ray Aman-drenin’ny Mpianatra Ao Gresy Ny Hampidirana An-tsekoly Ny Zanak’ireo Mpitsoaponenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Septambra 2016 12:50 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, русский, Ελληνικά, 日本語, English
Anjerimanontolon'i Makedonia, Thessaloniki, Avaratr'i Gres. Sary: Flickr / Nikos Pappas, Yannis Voutsalas / CC 2.0
Raha ny mahazatra ao Gresy dia vanimpotoana tony ny Septambra, fiomanana ho amin'ny fidirana manaraka, saingy ny lohataona tamin'ity taona ity dia nomarihan'ireo fepetra tsy mbola nisy toa azy noraisin'ny fikambanan'ireo ray aman-dreny.
Taorian'ny fanapahankevitry ny governemanta hampiditra an-tsekoly ireo ankizy 15.000 avy amin'ireo fianakaviana mpifindramonina sy mpitsoaponenana ho ao anatin'ny faritra fanabeazana ao amin'ny firenena, nambaran'ireo mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ireo Ray aman-dReny sy Mpiambina ao amin'ny Sekoly Fanabeazana Fototra faha-8 ao Oreokastro any Thessaloniki fa tsy ho avelan'izy ireo handeha an-dakilasy ny zanak'izy ireo. Nandrahona ny hanohitra ny drafitry ny governemanta mihitsy aza ilay vondrona, amin'ny fibodoana ireo tranobe fampianarana, raha toa mahazo alàlana hiditra ny efitrano fianaran'ny Grika ireo ankizy mpitsoaponenana.
Tondroin'ireo mpanakiana ho mpankasitraka ny fanavakavahana ilay fikambanan'ireo ray aman-dreny.
Tany amin'ny 1922, nomena ho an'ireo mpialokaloka avy any Pontos i Oreokastro. Mpialokaloka ireo raibe aman-drenibentsika, nefa isika mpanavakavaka…
Ambaran'ilay vondron'ny ray aman-dreny fa ny ahiahin-dry zareo voalohany indrindra dia mifototra amin'ny loza mitatao ara-pahasalamana mety haterak'ireo ankizy tsy vita vaksiny avy amin'ireo fianakaviana mpialokaloka, tamin'ny fampitandremana hoe hitondra aretina ao anatin'ny rafitra fanabeazana Grika izy ireny. Manohana izany fihevitra izany ny Dr. Asterios Gavotsis, ben'ny tanànan'i Oreokastro, mahatonga ny hafa hanontany tena momba ny lazany ara-pitsaboana, tamin'ny filazàny hoe “mitondra sy mampita areti-mandoza, toy ny hepatita sy tazo mahery” ireo ankizy mpialokaloka.
Mampitandrina ihany koa ireo ray aman-dreny fa mety hitarika ho aminà olana goavana amin'ny fifandraisana ny fahasamihafàn'ny fiteny, ny fiainana sosialy sy ny kolontsaina. Tsy safidy tsotra izao fotsiny ny fiarahana anaty efitrano iray miaraka amin'ireo ankizy eo an-toerana, hoy ilay fikambanana manamafy.
Mandeha ho azy ny hoe mifangaroharo ny toetsaina ety anaty aterineto momba ilay resabe, miaraka amin'ireo mpiserasera miady hevitra mafy momba ilay olana. Tanisain'ireo mpomba ilay fikambanan'ny ray aman-dreny ny zom-pirenena tsy manam-paharoa, ny filàna misoroka dieny mialoha ny hametrahan'ireo mpialokaloka ny fàkany ao Gresy, ary ny loza mitataon'ny “fahasimbàna”.
Na iza na iza maniry ny hampidirana an-tsekoly ny zanak'ireo Djihadista, fa tsy fandroahana azy ireo hiala an'i Gresy, dia aoka izy tenany no hampianatra azy ireny
Hazavain'i egrammes fa ho an'ny olompirenena Grika irery ihany no maimaimpoana ny fanabeazana :
Andraikitry ny fanjakana natao ho an'ireo olompirenena Grika irery ihany ny fanabeazana maimaimpoana (Constitution Article 16, par.4)
Raha manohana mafy ny hetsiky ny Fikambanan'ny Ray aman-dReny sy ireo fanapahankevitra tao Oreokastro kosa i FainaretiRom :
Iriko isika mba hanana [tanàna] 10 mahery toa an'i Oreokastro. Mety tsy hanana fahasimbàna tahaka izao ny firenentsika.
Mandritra izany fotoana izany, helohin'ny sasany ny fanavakavahana, amin'ny filazàna fa tsy mifanaraka amin'ilay hevitra ny zavatra tenenin-dry zareo hoe tokony havily tsy ho any amin'ny sekoly Grika ireo zanaky ny mpialokaloka, amin'ny fanondroana ny ankamaroan'ireo olona maniry amin'izao fotoana izao ny hanakatonana ny varavarana amin'ireny olona ireny dia tsy hafa fa taranaka mpifindramonina sy mpialokaloka daholo ihany koa.
Araka izay soratan'ny tranonkala iray ao an-toerana :
[…] Tao amin'ity faritra ity, eo anelanelan'i Paleokastro ankehitriny, fantatra fahiny tamin'ny hoe Daout-Bali, sy ny sisin'i Asprovrysi, Ak Bournar, any amin'ilay toeram-ponenana any amin'ny farany avaratra amin'ilay fari-piadidiana amin'izao fotoana, no notapahana hametrahana ny toeram-ponenana handray ireo mpialokaloka ao Pontian. Avy any amin'ireo vohitra ao amin'ny faritanin'i Argyroupolis, Mouzaina Tsimera, Xats, Agios Fokas, Kromni, Sourmena, Sistan, Lauria ary ireo vohitra ao Matsoukas ireny mpialokaloka ireny. Tamin'ny 1922 no nanombohan'ny fametrahana azy ireo ary nifarana tamin'ny 1930, niaraka tamin'ny fiatrehana ireo mpitsoaponenana hafa avy any Pontian Stavrin sy Kaokazy. Fianakaviana miisa 183 no fitambaran'ireo mponina voalohany tao amin'ilay faritra, izay niezaka nanafina tany anatiny lalina tany ny mangidy sy ny fahatsiarovana ny tany maminy niaviany, ary nanomboka nitolona mba ho tafavoaka velona sy ho tafiditra ao anatin'ny vataben'ilay fireneny vaovao. Niaraka tonga tamin'izy ireny ny fombany sy ny maha-izy azy ny fiarahamonina teo an-toerana. Ny faritra nametrahana azy ireo, tao Krioneri, dia nantsoina hoe Oreokastro (midika hoe “lapa mahafinaritra / tsara tarehy”) avy amin'ny hoe Lapa Tsara Tarehy teo anelanelan'ny vohitr'i Xats sy Agios Fokas […]
Ampahatsiahivin'i nikrtrah amin'ireo mponina ao Oreokastro fa efa mba mpialokaloka ihany koa ry zareo fahiny :
Ry mponin'i #oraiokastro, ahilio ireny olona vitsy fatra-mpanavakavaka ireny.
Efa mba mpialokaloka noho ny ady ihany koa ianareo.
Raha i ChrisSs_T_ sy epan_e_kinisi kosa indray nanakiana mafy azy ireo :
Monina ao anaty firenena iray isika, izay andrahonan'ny zafikelin'ireo Grika mpialokaloka avy any Azia Minora hanilikilika ny mpitsoaponenana ho any ivelan'ny fiarahamonina.
Mahamenatra ny hoe fikambanana fasista iray, ray amandreny tratry ny tazon-karena ao Oreokastro, izay toerana nonenan'ireo Grika mpialokaloka fahiny, no ankehitriny loza mitatao ho an'ny demaokrasia.
Miteny ny sasany ety anaty aterineto hoe toy ny eso ny valifaty anoherana ny lazaina fa loza mitatao ho an'ny fahasalamana aterak'ireo mpitsoaponenana any an-tsekoly, raha jerena ireo fanadihadiana mampiseho fa marobe ireo ray aman-dreny Grika no tsy resy lahatra amin'ny tokony hanaovana vaksiky sy ny tombontsoa azo amin'izany.
25 isanjato amin'ny Grika no tsy manao vaksiny ny zanany, kanefa dia manahy hoe ho voan'ny aretina entin'ireo ankizy mpitsoaponenana ry zareo.
Fanambarana ofisialy iray avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana no nanome ny sasany amin'ireo fanazavana tena nilaina momba ny olan'ny fanaovana vaksiny, tamin'ny filazàna fa “amin'ny ankapobeny dia zaza salama sy tsy mitondra tsimokaretina” ireo ankizy mpitsoaponenana.. Milaza ihany koa ny governemanta fa eo ampametrahana ny fandaharanasa hanaovana vaksiny ireo ankizy any amin'ireo tobin'ny mpitsoaponenana izy amin'izao fotoana izao. Mampitandrina ny manampahefana momba ireo “tahotra tsy marim-pototra” toy izay asehon'ny Fikambanan'ireo Ray aman-dReny sy Mpiambina.
Araka ireo tatitra vao haingana, nanokatra fanadihadiana mihitsy ireo mpampanoa lalàna ao an-toerana ary nampanao famotorana manenjika ilay ben'ny tanànan'i Oreokastro sy ny Fikambanan'ny Ray aman-dReny mba hanamafisana ny fisian'ny hadisoana mifanohitra amin'ny lalàna momba ny fanavakavahana.
Sary kanto nataon'i Panos Zacharis. Sariitatra miely any amin'ny media sosialy isankarazany.
Aza matahotra! Nandositra ny bala afomanga tany amin'ny firenenareo ianareo. Dia tena matahotra tokoa an'ireny ve ianareo? Tohizo ny dia!